Truth be known: November 2006
မနေ့က အသက် ၉၁နှစ် ပြည့်တဲ့ စာရေးဆရာမကြီး အမေ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ (တကယ်တော့ ဂါရ၀ပြုပွဲ ပါပဲ) ကို အနှစ် ၂၀ တိုင် ကျင်းပနေကျ တောင်လေးလုံး ကျောင်းတိုက်မှာ ပြုလုပ်ခွင့်မရလို့ မန္တလေး အမေ့ သမီးအိမ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အသက်၉၀ အရွယ် အဘွားကြီး (အသုံးအနှုန်းအတွက် ခွင့်လွှတ်ပါအမေ) တယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ပေးမလုပ်ရဲလောက်အောင် ဘာတွေကို ကြောက်နေပါလိမ့်။
ဒါနဲ့ပဲ ၁၉၉၆ ထုတ် ရာစုသစ် မြစ်ကျဉ်း -၄ ထဲက နောက်ထပ် ကဗျာတပုဒ် လက်ဆောင်ပေးဖို့ စိတ်ကူးပေါက်လာပါတယ်။ အမြီးကုတ်နေသူတွေ အတွက်ပါ။
Posted by generation96 at 2:08 PM0comments
ကျနော်မသိခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်မိပြန်လို့ ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ သိပြီးသားဆိုရင်တော့ sorry ပေါ့နော်။ ဒီတခေါက်တော့ ဗန်ကောက် နန်းတော်တွင်းက မြစိမ်းဆင်းတုတော်အကြောင်းပါ။
မြစိမ်း ဆင်းတုတော်ကို ၄၃ ဘီစီမှာ ပတ္တလိပုတ်မှာ Lord Abbot Nagasena ကပြုလုပ်ခဲ့ပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ နှစ် ၃၀၀ လောက်အကြာမှာ အိန္ဒိယ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ဘာသာခြားတွေရဲ့ ရန်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်သူတွေက သီရိလင်္ကာကို ဆောင်ယူစံမြန်းစေတာ အေဒီ ၄၅၇ အထိပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာဟာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး အထူးဆောင်ရွက်နေတာပါ။ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေနဲ့ မြစိမ်းရုပ်တုကို ပုဂံက ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ် မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့အချိန်မှာ သီဟိုဋ္ဌ်သားတွေက လိုလိုလားလားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရုပ်တုနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြန်သယ်ဆောင်လာတဲ့ သင်္ဘောဟာ မုန်တိုင်းအကြီးအကျယ်မိပြီး လမ်းပျောက်ကာ ကမ္ဘောဒီးယားကို ရောက်သွားပါရော။ အဲဒီကမှ ကမ္ဘောဒီးယားကို ယိုးဒယားအောင်နိုင်တော့ အယုဒ္ဓယကိုရောက်၊ ပြီး ဟိုရောက် ဒီရောက်ပေါ့ဗျာ။ ဘုရင့်နောင်ကြီး အယုဒ္ဓယကိုသိမ်းတော့ ချင်းမိုင်သားတွေက ချင်းမိုင်ကိုယူ၊ ၁၅၅၀ မှာ လာအိုမင်းသားကျေးဇူးနဲ့ လာအိုပါရောက်ပါသေး။ ၁၇၇၈ (၀ီကီမှာတော့ ၁၇၇၉ လို့ဆိုပါတယ်) ယိုးဒယားက လာအိုကို အောင်နိုင်တော့မှ မြစိမ်းဆင်းတုဟာ ယိုးဒယားပြန်ရောက်လာပြီး ဗန်ကောက်မှာထားတာ ဒီနေ့အထိပါပဲ။
အသေးစိတ် သိချင်သေးရင် ဟောဒီမှာ ဖတ်ပါ။ စာအုပ်ထဲကနဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ် တချို့ကလွဲလို့ အားလုံးနီးပါး တူပါတယ်။
ကဲကဲ၊ ဗန်ကောက်များရောက်ရင် အနော်ရထာကြီးမဖူးလိုက်ရတဲ့ မြစိမ်းဆင်းတုကို သွားဖူးကြပါအုံး။ မုန်တိုင်းများ မမိခဲ့ရင်တော့ ခုလောက်ရှိ ပုဂံဘုရား တခုခုမှာ စံနေလိမ့်မပေါ့နော်။
Posted by generation96 at 9:26 AM 1 comments
Posted by generation96 at 9:24 AM0comments
ဗမာပြည်ကို သွားလည်ကြမယ့် Tourists တွေအတွက် Al Jazeera သတင်းအဖွဲ့ရဲ့ အကြံပေးချက်လေး ဒီကနေ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်ကတော့ . . .
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ကို သွားကြည့်ပါ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်က အနီရောင်အလံတွေနဲ့ အိမ်ပေါ့။
ဒေါ်လာသုံးရင် သတိထားပါ။ အစိုးရဆိုင်လား၊ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်လား ငွေလဲနှုန်းကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
သာမန်ပြည်သူတွေနဲ့ ကြိုးစားပြီး စကားပြောကြည့်ပါ။ ကျုပ်တို့ သတင်းထောက်အဖွဲ့အနေနဲ့ အစိုးရလူတွေလိုက်ပါနေလို့ လူတော်တော်များများက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောရဲကြပါဘူး။
Tourist တယောက်အနေနဲ့တော့ ကျုပ်တို့ထက် ပိုပြီး လွတ်လပ်ခွင့် ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အမှန်တရားကိုရဖို့ ဗမာပြည်ကိုသွား အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း အရှိကိုအရှိအတိုင်း ကမ္ဘာကြီးကို ပြောပြပေးတဲ့ Veronica Pedrosa နဲ့ Al Jazeera တဖွဲ့ လုံး ချီးမွမ်းခံထိုက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီအကြံပေးချက်လေးတွေကို ပိုလို့ သဘောကျရတယ်။ Thank you Al Jazeera!
Posted by generation96 at 8:53 AM 1 comments
Thanks toafriend, I found this video on Google. Interview with students about 96 uprising, scenes of demonstrations took place on7December 1996 as well as some scenes of 1988 demonstrations are included. Please watch the video HERE.
Posted by generation96 at 2:22 PM0comments
ကြားရက်နဲ့ ပင်းနေတဲ့ နားတွေ
မြင်လိုက်ရက် ကန်းတဲ့ မျက်စိတွေ
လှလှပပ ဆွံ့အနေတဲ့ ပါးစပ်တွေ
၁၉၉၆ ဖေဖော်ဝါရီ ထုတ် ရာစုသစ် မြစ်ကျဉ်း ကဗျာ စုစည်းမှု ၊၄၊ မှ ကူးယူပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးရင် နားတွေ(ပင်းနေခဲ့ရင်) လည်း ကြားပါစေ၊ မျက်စိတွေ(ကန်းနေခဲ့ရင်)လည်း မြင်ပါစေ၊ ပါးစပ်တွေ(ဆွံ့အနေခဲ့ရင်)လည်း ပွင့်နိုင်ပါစေ လို့…..။
Posted by generation96 at 12:56 AM0comments
ကထိက ဦးစိန်လွင်လေး(၀ိဇ္ဖာ-ဂုဏ်ထူး၊ ဒီဂျေ) ရေးတဲ့ “နတ်သျှင်နောင် နှင့် ဓါတုကလျာ” စာအုပ်လေးတွေ့ ပြီး ငဇင်ကာနဲ့ အကြောင်း ဘာများ ရေးထားမလဲလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ အဲ နတ်သျှင်နောင် ကိစ္စတော့ နောက်မှ ပြောတော့မယ်။ ခုတော့ ဖတ်မိတာလေးတွေ အရင် ပြောပါရစေဗျာ။
မဟာဥပရာဇာ မင်းကြီးစွာ ယိုးဒယား တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးပြီးနောက် အိမ်ရှေ့နေရာ လစ်လပ်ရာ သားတော် အင်းဝ-မင်းရဲကျော်စွာကို အိမ်ရှေ့ပေးရန် သက္ကရာဇ် ၉၅၅ခု၊ ပြာသိုလဆန်း ၈ရက်နေ့တွင် (မြန်မာ သက္ကရာဇ်ပါခင်ဗျာ) နေပြည်တော်သို့ ခေါ်တော်မူသည်။ ရောက်လျှင် အိမ်ရှေ့နေရာ ပေးတော်မူသည်။ အိမ်ရှေ့မင်းသစ် မင်းရဲကျော်စွာသည် အဆင်အခြင်ဥာဏ် ကင်းမဲ့သည်။ သေရည် သေရက် မူးရစ်ကာ ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင် ထင်ရာကို ပြုတတ်သည် (ဒါများ ထူးဆန်းလို့လားကွယ်)။ မင်းရဲကျော်စွာအား အိမ်ရှေ့ပေးခြင်းမှာ မှားခြင်းကြီးမက မှားလှစွာ၏။
မင်းရဲကျော်စွာသည် လက်အောက်ခံ မွန်လူမျိုးတို့အား လယ်မလုပ်ရဟု အာဏာနှင့် တားသည်။ ထို့နောက် မိမိပိုင် ကျွှဲအရှင်း နှစ်ထောင်ကျော် သုံးထောင်နှင့် မြေပြင်အနှံ့ လုပ်ကာ ရသမျှ စပါးကို မိမိ၏ ကျီတိုက်ထဲသို့ သွင်းသည်။ စပါးရှားသောအခါ မိမိပိုင် ကျီတော်မှ စပါးကို ဈေးတင်ကာ ထုတ်ရောင်းသည်။ ထိုအခါ ပြည်သူပြည်သားတို့ ဆူပူကြကုန်သည်။
(ချီးကျူးစရာပဲပေါ့၊ လာဘ်မြင်တယ်နော်။ ထုတ်ရောင်းတာပဲ ကျေးဇူးတင်။ export လုပ်လိုက်မှ ထမင်းရည်သောက်နေရမယ်။ တဖက်ကကြည့်တော့လည်း တုံးသလိုပဲ။ ခုခေတ်ဆို လယ်မလုပ်ရလို့ မတားပါဘူး။ စိုက်ပြီး လာပို့ခိုင်းလိုက်တာပဲ။ လိုနေရင်တောင် ၀ယ်ပြီး quota ပြည့်အောင် ဖြည့်ပေးရသေး။)
အိမ်ရှေ့မင်း မင်းရဲကျော်စွာသည် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရေး၌ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိပဲ မိမိ၏ ငယ်ကျွန်တော်၊ လူယုံတော်၊ မိမိဖက်သားများကို ရာထူးအမျိုးမျိုးခန့်၍ အရေးပေးကာ စီမံ ခြယ်လှယ်စေသည်။ နဂို ရှိရင်းစွဲ အမတ်တို့မှာ မင်းရဲကျော်စွာ၏ လူများ ကြိုးဆွဲရာကို ကနေကြရသည်။ ထိုအခါ အုပ်ချုပ်ရေးဖက်၌ များစွာလစ်ဟင်းလေသည်။
(အလဲ့ သူက ဒီလိုကျ ခေတ်မှီသားပဲ။ အာ..မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခေတ်ကလူတွေ သူ့မှီတာပေါ့။ အင်း..မင်းရဲကျော်စွာများ ၂၁ရာစု ပြန်ရောက်လာလေသလား။)
- စာမျက်နှာ ၁၅၆ - ၁၅၇
၁၉၆၇ခု၊ စက်တင်ဘာလမှာ ခေတ်မှီ စာပေတိုက်၊ ရန်ကုန်မှ တန်ဘိုး ၅ကျပ်နဲ့ ထုတ်ဝေပါတယ်။
Posted by generation96 at 9:36 AM0comments
A short video clip showing scenes of 96 uprising on2December 1996 was uploaded onto Stickam you see in the right panel. Found that clip on CNN but failed to find the one showing violence used by riot polices on7December early morning at Hledan junction. Anyway, something is better than nothing.
Posted by generation96 at 8:54 AM0comments
အခုထပ်ရေးမှာက နောက်ထပ် ကျနော်တို့ မသိခဲ့တဲ့ သမိုင်းအချက်လေးပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်လိုက်ရတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကိုယ်ကချည်း ယိုးဒယားကို တွယ်လိုက်တာ ကျနော်မှတ်မိသလောက်တော့ ဗမာတွေ အတွယ်ခံရတဲ့ အကြောင်း မသင်ခဲ့ဖူးပေါင်။ စစ်ပဲလေ၊ သူချ ကိုယ်ချ ရှုံးတဲ့ အခါလည်း ရှုံးပေမပေါ့။ မျိုးချစ်စိတ် ရှင်သန်ထက်မြက်အောင်ဆိုပြီး ကိုယ်နိုင်တာချည်း ပြောပြတော့လည်း ဘယ်ဟုတ်ပေမလဲလို့။
၁၅၈၁ ဘုရင့်နောင် ကံကုန်တော့ သားတော် နန္ဒဘုရင် တက်ပါတယ်။ ၁၅၆၉ ကတည်းက ဗမာလက်အောက် မင်းမှုထမ်းနေတဲ့ ယိုးဒယားမင်းသား နရဲစွမ်း က ၁၅၈၄ မှာပုန်ကန်တော့တာပါ။ သူက မိုးကောင်း ခြားနားတုန်းက အိမ်ရှေ့စံ မင်းကြီးစွာ ရယ်၊ နတ်ရှင်နောင် ရယ်နဲ့ တွဲပြီး တိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့တပ်ကြောင့် မိုးကောင်းကို အောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ချကြပြန်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဗမာဘုရင်တွေထဲမှာ နန္ဒဘုရင်ကတော့ အခြာဆုံးပေါ့။ ၁၅၈၄၊ ၁၅၈၅၊ ၁၅၈၆၊ ၁၅၉၀ နဲ့ ၁၅၉၂ စုစုပေါင်း ၅ခေါက် တီးတာ တခါမှ မနိုင်တဲ့အပြင် နောက်ဆုံးတခေါက်မှာ သားတော် ဥပရာဇာပါ ကျပါရော။ နှစ်ယောက်သား duel ဆွဲကြတာမှာပါ။ တတိယ တခေါက် နန္ဒဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဆင်းတိုက်တဲ့ တခေါက်ပဲ အယုဒ္ဓယကို ၀ိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ၇ လ ၀ိုင်းပြီးတော့ပြန်ရတာပါ။ ကျန်တဲ့ လေးခေါက်က ဥပရာဇာ တိုက်တာပါ။ ဒါတင်လား ဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ၁၅၉၂ စစ်မှာ နရဲစွမ်းက လိုက်တီးတာ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ တနင်္သာရီ အကုန်ကုန်ပြီး ပဲခူးနဲ့ တောင်ငူပါ အ၀ိုင်းခံရ သတဲ့။ ကျနော်တို့သိတဲ့ သမိန်ဥပါကောင်း ကျတာ တနင်္သာရီပွဲမှာပေါ့။
နရဲစွမ်းကို လေးစားစရာ တခုရှိပါတယ်။ သူဟာ ဗမာကို ပုန်ကန်ချိန်မှာ မင်းသားပါ၊ ဘုရင်အရာကို သူ့အဖေ မဟာဓမ္မရာဇာကိုပဲ ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်က သူ့တပ်ပါ။ သူသာ တခြား ဘုရင်တွေလို အာဏာ မက်မောခဲ့ရင် အချိန်မရွေး သူ့အဖေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သား ကို အဖေသတ်၊ အဖေကို သားသတ်တွေ ဗမာ ရာဇ၀င်ရော၊ ယိုးဒယား ရာဇ၀င်မှာပါ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ သူ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၅၉၀ သူ့အဖေ ဆုံးမှ နန်းတက်ပါတယ်။ ဒါတွေ ကြောင့်လည်း ယိုးဒယားတွေဟာ နရဲစွမ်းကို ချစ်မြတ်နိုး ကြပုံပါ။ ဗမာကို အောင်နိုင်တာလည်း ပါပေမပေါ့။
အာဏာဆိုတာ ယူသင့်တဲ့ အချိန်မှ ယူရပါတယ်။ အဲလိုမှ လူချစ်ပါတယ်။ အတင်းလု မယူရပါဘူးခင်ဗျာ။ မှတ်သားကြပါအုံး။
အဲဒီနောက်တော့ တချိန်က ဗမာပိုင် ချင်းမိုင်၊ ရှမ်းနယ်မြေတော်တော်များများ၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ တနင်္သာရီ တွေအားလုံး ယိုးဒယားအောက် ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပဲခူးနဲ့ တောင်ငူ ကပါ နှစ်စဉ် ပဏ္ဏာဆက်ရပါသတဲ့။ ၁၆၀၄ အင်းဝ ကောင်းစားမှ ရှမ်းနယ်မြေတွေ ပြန်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် နရဲစွမ်းက ပြန်တိုက်တာမှာ ဗမာ့နယ်မြေထဲမှာ ရောဂါနဲ့ဆုံးလို့ စစ်ရပ်သွားတာပါတဲ့။
၁၆၁၀ ကနေ ၁၆၂၈ အတွင်းမှာတော့ ချင်းမိုင်အပါအ၀င် အကုန် ပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲ ၁၆၅၈ - ၁၆၆၈ အတွင်း ယိုးဒယားဘုရင် Narai လက်ထက်မှာတော့ ချင်းမိုင်ဟာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဟိုဘက်ရောက်လိုက် ဒီဘက်ရောက်လိုက် ဖြစ်ရာကနေ တရုတ်တွေ ရှမ်းပြည်ကို ၀င်တိုက်စဉ်ကာလပိုင်းမှာ ဗမာ လက်အောက်ခံ ချင်းမိုင်ဟာ တရုတ်ရန်ကြောက်လို့ အယုဒ္ဓယကို စစ်ရေး အကူအညီပေးဖို့ တောင်းဆိုပါသတဲ့။ အဲလိုကနေ စလိုက်တဲ့စစ်မှာ တရုတ်ကို တိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဗမာဟာ ယိုးဒယားကို အောက်ဗမာပြည်၊ ချင်းမိုင်၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ တောင်ငူ ဆုံးပြီး အင်းဝ အ၀ိုင်းခံရ ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ယိုးဒယားအောက်က ပြန်လွတ်လာလည်းတော့ သမိုင်းအထောက်အထား မရှိလို့ မသိတော့ပါ။
ဒါတွေသိတော့ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ မတုံးဘူးပေါ့နော်။ ငါတို့က ဒင်းတို့ကို ငယ်နိုင်ဆိုပြီး အလကားနေ ဘ၀င် လေဟပ်မနေတော့ဘူးပေါ့။ အတုံ့အလှည့် ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ အမြဲ နိုင်မနေပါဘူး။ အလှည့်ကျရင် ခံရပါလိမ့်မယ်။ သံဝေဂလေးတွေ ယူတတ်ရင် ယူကြပါနော့။
Posted by generation96 at 10:11 AM2comments
မထူးပါဘူး။ လက်ချာ နည်းနည်းထပ်ရိုက်လိုက်ပါတော့မယ် ပြောလက်စနဲ့။ ၁၅၃၈ မှာ ယိုးဒယားပိုင် အတ္တရန်ဆိုတဲ့ မြို့ကို တပင်ရွှေထီး သိမ်းရာကနေ စလိုက်တဲ့ နောင်ဂျိန်ဟာ ၁၈၀၉ ဗမာတွေ ဖူးခတ် ကိုသိမ်းတဲ့ အထိ ကြာပါသတဲ့။ အဲ အကြီးအကျယ် ကျွေးကြတာကတော့ ဒုတိယစစ် ၁၅၄၈ ကျမှပါ။ တပင်ရွှေထီးပါပဲ။ ဘာကြောင့်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေ မရှိပါဘူး။ အယုဒ္ဓယကို ၀ိုင်းတယ်။ မသိမ်းနိုင်ပါဘူး။ အဲ မြို့ပြင် ထွက်တိုက်တဲ့ ဘုရင့်သားတော်နှစ်ပါးကိုတော့ ဖမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆင်ဖြူနှစ်ကောင်နဲ့ သားနှစ်ပါး လဲပြီးပြန်လာတယ်ဆိုပါတယ်။
တတိယစစ်မှာ ဆင်ခြေပါပါတယ်။ ဒုတိယစစ်နဲ့ မရှေးမနှောင်းပေါ့။ ဒီတခါ ဘုရင့်နောင် အလှည့်ပါ။ ဆင်ခြေက ဒီလို။ ဆင်ဖြူတော် တောင်းတာကို မပေးလို့ ဆို ပြီး ဆော်တာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ ယိုးဒယားဘုရင် မဟာချတ်ကရာပတ်က ဆင်ဖမ်းကောင်းပြီး ခုနစ်ကောင်တောင် မိတာကိုး။ ဒီကိစ္စကို သူတို့ကတော့ ဘွင်းဘွင်းပဲ ကံမကောင်းကြောင်း ရေးပါတယ်။
“The possession of so many white elephants instead of bringing him good luck as forestalled by old traditional beliefs, it brought him sorrow and grief. The king of Burma saw in this an opportunity to ask for the white elephants at the refusal of which, he could simply attack Ayudhya withaclear conscience.”
M.L. Manich Jumsai: Popular history of Thailand, p. 157.
အင်း … ဆင်ဖြူတိုင်းလည်း ဘုန်းကြီးလို့ ကံမကောင်းဘူးတဲ့။ ဆင်မဖြူပဲ ညိုနေရင် သာဆိုးတာပေါ့။ မှတ်သားကြပါပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ချကြရော ဆိုပါတော့။ ထုံးစံအတိုင်း အယုဒ္ဓယကို ၀ိုင်းပေါ့။ ဒီတခါတော့ ကျနော်တို့ဘုရင်က ဆင်နဲ့တင် မရတော့ဘူး။ ဆင်ဖြူ ၄ ကောင်အပြင် မင်းသားနှစ်ပါးပါ ပြန်ပေးဆွဲလာတယ်။ G.E. Harvey ရေးတဲ့ “History of Burma” ဗမာရာဇ၀င်မှာတော့ အယုဒ္ဓယကို သိမ်းမိပြီး ကြေးသွန်းရုပ်တုတွေ၊ ဆင်တွေ၊ ပြဇာတ် မင်းသား မင်းသမီးတွေ၊ ဘုရင့်သမီးတော်တွေ၊ လှည်းလိုက် လှည်းလိုက် စိန်ရွှေရတနာတွေ ပဲခူးကို ယူလာတယ်ဆိုပဲ။
စတုတ္ထစစ်က ယိုးဒယားသစ္စာခံ Pitsuloke အပိုင်စား မဟာဓမ္မရာဇာ က လာအိုကို ယိုးဒယားမင်းသမီးပို့မယ်ဆိုတာ ဘုရင့်နောင်ကို အတို့အထောင်လုပ်ရာက စပါတယ်။ ဒါမျိုးဆို တို့ဗမာ အကြိုက်ပေါ့။ တို့ဘုရင်က ယိုးဒယားမင်းသမီးကို လာအိုအသွား တောလားမှာ ဖြတ်သုတ်ရာက ချလိုက်ကျတာ ၁၅၆၉ မှာ အယုဒ္ဓယ ဗမာလက်အောက် လုံးလုံးရောက်မှ ပွဲပြီးပါတယ်။ အောင်နိုင်သူကတော့ မီးမွှေးတဲ့ မဟာဓမ္မရာဇာပါ။ သူ့ကို အယုဒ္ဓယ ဘုရင်ခန့်ခဲ့တာကိုး။
နောက်ဆုံးတော့ ဟိုဘက် ဒီဘက် ခုန်ခုန်ကူးတဲ့ သူတွေပဲ ကောင်းစားတာကိုး။ မှတ်ရပြန်ပြီ နောက်တချက်။
ဆင်ဖြူရှင် ဘုရင့်နောင်ကြီး အယုဒ္ဓယကို လုပ်ကြံပုံ ပြောပါရစေအုံး။ နှစ်ဖက် တိုက်နေတုန်းမှာပဲ မဟာချတ်ကရတ်ပတ် ဆုံးပြီး Mahintaratirat နန်းတက်တယ်တဲ့။ စစ်ကတော့ ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ စစ်ကို ဗိုလ်ချုပ် Phya Ram ကဦးစီးပြီး ဆက်တိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဘုရင့်နောင်က စစ်ဟာ မဟာချတ်ကရတ်ပတ်ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်၊ သူဆုံးတော့ Phya Ram ကဆက်ပြီး ဗမာကိုဆန့်ကျင်နေတယ်။ တကယ်လို့ Phya Ram ကိုသာ အပ်မယ်ဆိုရင် သူ စိတ်ပူစရာ မရှိတော့ဘူး။ တပ်ကို ရုတ်ပြီး ပြန်မယ်လို့ ကမ်းလှမ်းသတဲ့။ ယိုးဒယားဘုရင်လည်း ယုံစားပြီး သူ့ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘုရင့်နောင်လက် ထိုးအပ်လိုက်ပါရော။ ပွဲက မပြီးဘူးဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ပျော်ပျော်ကြီးဖမ်းလည်းပြီးရော ဘုရင့်နောင်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုချင်ရင် ဘုရင်နဲ့ နန်းတွင်း အဆင့်မြင့် ၀န်ကြီးတွေ သူနဲ့ ထွက်တွေ့ရမယ်လို့ လုပ်လာပါတယ်။ အခုမှတော့ ဘယ်ယုံတော့မလဲကွယ်။ ပြောရင် ရှည်ပါတယ်။ ဆက်ချကြတော့ ဗမာနိုင်သည်ပေါ့။
ဒီမှာ ပြောစရာလေးက သူ့ဗိုလ်ချုပ်ကို လိမ်ဖမ်းတာပါ။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က လုပ်တာဆိုတော့ အတော် ကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့။ ၁၆ ရာစုကတည်းက ဒီလို လိမ်တတ်တဲ့ လူကြီးလူကောင်း မပီသတဲ့ ကျနော်တို့ အာဏာရှင်တွေဟာ ၂၁ ရာစုရောက်လည်း ဒီအချိုးပါပဲလား။ ဆွေးနွေးဖို့ ဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ နောက်ဆုံးတော့ အကြမ်းဖက်ရန် ကြံစည်မှုနဲ့ ဖမ်းမတဲ့။ မညစ်ပတ်ကြပါနဲ့ဗျာ။
Posted by generation96 at 12:41 PM4comments
သမိုင်းဆိုတာ မတုံးအောင်သင်ရတာလို့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ပြောလို့ ယိုးဒယားတွေ သူတို့နဲ့ ဗမာနဲ့ နောင်ဂျိန် ပလေးကြတာကို ဘယ်လိုတွေများ ရေးထားသလဲဆိုပြီး ရှာဖတ်ကြည့်မိတော့။ လားလား။ မကြားဖူးတာတွေ မသိခဲ့တာတွေ ဖတ်လိုက်ရသဗျို့။
ကြပ်ပြေးက ရုပ်တုကြီးတွေတော့ အောက်ကစာဖတ်ပြီး ဘာများပြောမလဲမသိ။ သူ့တို့ရှေ့သွားသွားပြီး နယ်ချဲ့ တွေ၊ ကျူးကျော်ရေးသမားတွေ ဘာညာ အော်အော်နေတော့ အတော် နေရထိုင်ရ ခက်ရှာမှာပဲ။ ရုပ်တုဆိုတော့ ထွက်ပြေးလို့လည်းမရ၊ အော်ဒုက္ခ။
The following is an extract from page 193 of “Popular History of Thailand” by M.L. Manich Jumsai.
In all sieges of Ayudhya the Burmese had up to 1000 picked Portuguese soldiers led by their own captains to fight for the Burmese kings. Thus, Tabinshweti had Joano Cayeyro and his fearless Portuguese as his bodyguard, and later Diego de Mello and his men to command the artillery. He besieged Ayudhya using artillery manned by Portuguese.(1) Bayinnaung also used Portuguese mercenaries in his army who used firearms with great effect.(2) Great number of Portuguese had been allowed and even encouraged to settle down in Burma and marry Burmese wives so that their descendants could serve Burmese kings.
(1) W.S.Desai. ”Pageant of Burmese History”, p. 59
(2) W.S.Desai: ditto, p. 68.
ဒါလည်းဖတ်ပြီးရော စဉ်းစားမိတယ်။ ကျနော်တို့ တတွေ ပေါ်တူဂီသွေးများ ပါလေမလားလို့။ ပြောမရဘူးနော်။ နတ်ရှင်နောင်ခမျာ ငဇင်ကာကောင်းမှုနဲ့ သုဂတိလားသွားတာ။ ငဇင်ကာကို သူခေါ်တာရော ဟုတ်ပါ့မလားရယ်။ တပင်ရွှေထီးတို့ ဘုရင့်နောင်တို့ ကျေးဇူးတွေ ဖြစ်နိုင်တာပဲကို။
အော်ကြုံတုန်းလေး ပြောပါရစေအုံး။ သူတို့ အပြောအရတော့ အလောင်းဘုရားဟာ အယုဒ္ဓယကို အပြင်ကနေ အမြောက်နဲ့ စိမ်ပြေနပြေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် နေ့ရောညပါ သမနေတုံး ကံကြမ္မာက ဖန်လာတော့ နေရင်းထိုင်ရင်း ကိုယ့်အမြောက်ဆန်ကထကွဲ အပိုင်းအစမှန်ပြီး ဒဏ်ရာပြင်း ရပါလေရောတဲ့။ ၁၇၆၀ ဧပရယ် ၁၆ မှာလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီညမှာပဲ အလောင်းဘုရားကိုယ်တိုင် ဆုတ်မိန့်ပေးပြီး အပြန်လမ်းမှာ ဆုံးပါတယ်တဲ့။ ၂၀ ဧပရယ်မှာမှ ပြုသမျှနုနေရတဲ့ ယိုးဒယားစစ်တပ်က လိုက်တိုက်ပေမယ့် ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ ဘယ့်နှယ် ဗန္ဓုလနဲ့ လာတူနေပါလိမ့်ရယ်။
ကျနော်တို့ မသိတဲ့ သမိုင်းလေးတချက်ပါ။ ကြိုက်တာတချက်က ယိုးဒယားတွေက သူတို့တော်လို့ အလောင်းဘုရား ဆုတ်ပြေးရတယ်လို့ မရေးတာကိုပါ။ သမိုင်းဟာ အမှန်အတိုင်းရှိသင့်ပါတယ်။
Posted by generation96 at 12:49 PM4comments
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူတိုင်း လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ဆိုတာလည်း နိုင်ငံရေးပဲ၊ ပညာရေး ဆိုတာလည်း နိုင်ငံရေးပဲ၊ ကျန်းမာရေး ဆိုတာလည်း နိုင်ငံရေးပဲ၊ အရောင်းအ၀ယ် လည်း နိုင်ငံရေးပဲ၊ လမ်းသွား လမ်းလာလည်း နိုင်ငံရေးပဲ။ အဲတော့ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ အမြဲ ကျမတို့ ရှင်သန်နေဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ တကယ်ပဲတိုးတက်ဖို့ ဆိုတာဟာ ပြည်သူတွေဟာ ဇွဲ၊ သတ္တိ၊ ၀ီရိယ၊ လုံ့လ၊ စိတ်ခိုင်မြဲမှု ဒီဟာတွေ အားလုံးရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို ပြည်သူတွေ ရှိတဲ့နိုင်ငံသာလျှင် တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
Many of you have probably watched it. But I just can’t help restraining myself from putting it on the blog. There are lots of historic pictures and video clips inside. It sure playsapart of modern Burma.
Just look at how much she is loved across the country. From young children to the aging population, everyone loves her, adore her.
May she be free….may we be free.
Posted by generation96 at 1:30 AM0comments
အရိပ် မပေးနိုင်ကြတဲ့ အကြောင်းကို
၁၉၉၆ - ၉၈ ပတ်ဝန်းကျင် လောက်က ထုတ်ဝေတဲ့ အင်နားရှား၊ ဥာဏ်လင်းမင်း၊ မြူဝေ တို့ရဲ့ မညီညာတဲ့ စက်ဝိုင်း ကဗျာစာအုပ်ထဲက ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
မြက်စဉ်းသမားကတော့ ရှင်းပြနေတုန်းပါ။ မြက်ရိုင်းတွေကတော့ နားလည်ဟန်မတူပါဘူး။
Posted by generation96 at 9:19 AM0comments
The protest was the biggest since 96 student movements. We were again sat on the floor of historic YIT building one. We were again locked inside the school. We were again fighting for the good of the country. Although the anger was mainly directed towards lack of teaching time before the exams as well as the news of plan to splits up the campus into Hlaing Thar Yar and Sinde (Pyay) campuses, it was after all against the ruling regime. Within minutes of protest inside the campus, scores of police showed up outside the walls of YIT along with plain clothed MIs and SBs. Powerful cameras and video cameras were set up just outside the small entry gate near building one and believed to have recorded every movement inside.
The students reacted this by hanging posters with slogans and demands on the walls of YIT right in front of their cameras coolly. Moreover, the E2000 light truck which was parked in front of student affairs office was moved to block the views of cameras set up outside. A large crowd was formed and the rector was trying hard to appease the students. One after another, students stood up and let out their anger at him. Many time the rector or the secretary or others who held high position in schools assured us that the school would not move anywhere (which wasaplain lie). They also assured us that we be graduated in within6years no matter what. We complained we had not really learnt anything (less than two months of study including 1996 school time) and they told us it was out of their hands. We wanted true education and they offered us fruitless education.
With no hope to get out of school with police around, and traffic completely diverted, we decided to continue the protest peacefully from inside the compound. The democratic songs and student union songs were written down on paper by those who knew these by heart. Many others copied the songs on their books and distributed to as many students as possible. Posters were drawn using drawing sheets and our national anthem was sung the whole day.
(I would have to honestly say that I did not remember how many days we had protests in YIT. Personally I think it was only one day because the school was officially closed the following day until the exam started.)
With darkness insight and unusual movements of troops outside, as well as by then known knowledge of the regime’s nature of making attack in dark(they did that always, in 88, in 96, in 98, and in 2003 depayin), I decided to leave. I and my friends sneaked out of the school by takingalecturer car. We saw continuous line of military trucks from YIT to Thamine Junction with shields and sticks loaded. There were unconfirmed reports of police entering the campus around 8pm that day.
Although the school was closed, hostel students still staged protests every night in Hlaing campus and YIT campus. However, they were all under unofficial curfew and never managed to get out of their respective compounds. Hlaing and YIT campuses were off limit to people these days with barbed wire and military trucks blocking every entrance available.
When the exams started, the suspected student leaders were not allowed to take the exams at YIT. Instead, they were forced to take the exams at GTI. Some of them were taken to MI HQ set up in Hlaing Campus during exam time and plainly threatened not to take part in any of the protests. They were even told that they would be arrested even if they were seen watching others protesting.
The exams ended without any further protests and students were quickly sent back to their home towns. However, most of the students having needed to take exam at GTI did not getachance to see their family when they went back for they were arrested at the jetty, at the stations or at the highway bus terminals. It was one after another in Rangoon. For about2months, I learnt one friend after another taken from their homes at night. Not only YIT students, students from other universities were arrested also. They were later sentenced to7years in jail for breaking which law we never know.
Posted by generation96 at 1:01 AM 1 comments
So you have seen the wedding. Now, let's takealook at the the building, Zayar Thiri Baikman, where they staged the reception.
An aerial view here. The orange circled building is Zayar Thiri. The one in red is popular Junction 8 and the yellow the former Yangon City Hotel you used to see at 8 mile junction. hmm...get the picture?
Feeling disgusted? Don't be. Takealook at the residence which is allegedly the compound of Than Shwe below. The two houses in front of him were believed to be the houses of Khin Nyunt and Tin Oo. The orange rectangle isajunction where you turn into North Oakkala from Kabaraye Pagoda.
Oh yes, all these buildings are inside the compound of Rangoon Division military HQ. Too large you think? Nah...just look at the buildings..not even big enough too see these from space.
So who say Burma is one of the poorest? We are in the UN's list of LDCs? Heck! it must beamistake.
Posted by generation96 at 1:55 AM 1 comments
၁၉၈၈ စစ်တပ်ရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်မှသာ ဖြစ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ နောင်တော် ကျောင်းသားများရဲ့ ကဗျာပါ။ ၁၁နှစ်သား ဘ၀ ထဲက သူတို့လိုမုန်း၊ သူတို့လို နာကြည်းခဲ့လို့ ဒီကဗျာကို အလွတ်ရနေခဲ့ပေမယ့် ကဗျာရေးတဲ့ သူကိုတော့ မှတ်မထားမိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် နောင်တော် ကဗျာဆရာကို ဒီနေရာကနေပဲ တောင်းပန်ရင်း ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ အကိုတွေ၊ အမတွေနဲ့ ပေးဆပ်နေကြဆဲ အကိုတွေ၊ အမတွေ၊ ညီတွေ၊ ညီမတွေကိုပါ ဦးညွှတ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ၊ ချင်းတွင်း၊ စစ်တောင်း၊ သံလွင် စသော မြစ်ကြီးများ
သိမ်းဆည်း သိုမှီးထားသော စပါးကျည်ကြီးများ
ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက် အသက်ရှု ရပ်ထားပါ၊
ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးငှက် အသက်ရှု ရပ်ထားပါ။
Posted by generation96 at 1:14 AM0comments
အမှောင်ထုထဲက ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် အခုတလော ဖယောင်းတိုင်တွေနဲ့ ထိန်ထိန်ညီး နေပြီ။ မှောင်ချင်သလောက် မှောင်ပါစေ၊ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ များရင် ဒီအမှောင်ကို ခွင်းနိုင်မှာပါ။ ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက်လေး
အမှောင်ကို ခွင်း၍ အလင်းဆောင်စေသောဝ်။
Posted by generation96 at 10:04 AM0comments
A Blogger with the name and link in this post said...
Hi Ko Generation96, Can you remove all the blogger's links, and associated mentionings within this post? As your blog is very political, we are afraid of the consequences. We have already voiced our feelings in the blogs so I think that is quite fair and enough. (It is even more than enough compared to more than 100 of silent Myanmar bloggers). We know you are doing good but we can't afford or risks the danger as most of us are blogging with real identities and real names, Not using pseudonyms. We also think this is end October so the post has already served its intention to wish Ko Min Ko Naing's birthday. Many people has already read this post. So its better not to archive it as it includes many non-political citizen bloggers.Hope you understand. Thank you.
ကျနော့်ဆီကို ရောက်လာတဲ့ “တွန်းနေကြမယ့်သူတွေ” အတွက် comment လေးပါ။ ဒီစာရဲ့ ကလောင်ရှင်ဟာ တကယ်ပဲ ကျနော် link လုပ်ထားတဲ့ လူတွေထဲက ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာပါ။့ ဟုတ်ခဲ့သော် ဆိုပြီး link တွေကိုတော့ ဖြုတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ စိတ်တော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ link ၆ခုရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ အဲဒီ link ပိုင်ရှင်တွေ ဒီစာကို ဖတ်မိလို့ မွေးနေ့ ဆုတောင်း linkတွေ ပြန်တင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် generation96@gmail.com ကို email ပို့ပေးကြပါနော်။ link တွေကို သိမ်းထားပါသေးတယ်။
ရေးသူရဲ့ concern ကိုကျနော် နားလည်ပါတယ်။ တခုတော့ ပြောပါရစေ။ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး လုပ်ယုံနဲ့တော့ မဖမ်းပါဘူး။ သူတို့ ဒီလောက် မအားပါဘူး။ ကျနော်တို့က ခေါင်းဆောင်တွေ ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့ဗျာ။ အသေးအမွှားလေးတွေက စဖမ်းနေရရင် ထောင်တွေလည်း ဆန့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ ဥပမာဗျာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ လူ၅သိန်း အရင်ဖမ်းရတော့မယ်။ နောက် ဘုရားတွေမှာ၊ church တွေမှာ၊ ဗလီတွေမှာ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အင်္ကျီအဖြူဝတ် လူတွေဖမ်းရမယ်။ သဘောကို ပြောတာပါ။
(It is even more than enough compared to more than 100 of silent Myanmar bloggers) ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ဆက်လုပ်နေမယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ မသိလို့ ဘာမှမလုပ်လိုက်ရတဲ့သူတွေ၊ သိသိနဲ့ မလုပ်ရဲလို့ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်း နောက်ကို လုပ်နိုင်ကြပါစေပေါ့။
October မဟုတ်တော့လို့ ဒီဆုတောင်းတွေ မလိုတော့ဘူးတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ဒီမွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ကြီး မလွတ်လပ်သွားပါဘူး။ အဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖတ်မိတဲ့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့၊ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ လူတွေ အတွက်တော့ အားဆေးပေါ့။ သူတို့သိရင် သူတို့ပျော်မယ်။ အော် နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေ၊ ငါတို့ကို မမေ့ဘူး၊ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီး အားတွေဖြစ်မယ်။
အဲဒီလိုလေးအတွက် ကျနော်ဒီစာကိုထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပေးနိုင်တာ စိတ်အင်အားပါ။ ကိုယ်ပေးနိုင်တာလေးတော့ ပေးပေးကြပါဗျာ။
comment ရေးတဲ့သူကို တောင်းပန်ရပါအုံးမယ်။ ဒီလိုကြီး post အနေနဲ့ ချရေးလိုက်လို့ စိတ်မရှိပါနဲ့လို့။ ဒီလိုအတွေး ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုခတ်ဆန်ဆန်အတွေး ရှိတဲ့ လူတိုင်းအတွက် ရည်ညွှန်းချင်လို့ပါ။ ဒီတခါ ကျနော့်ကို နားလည်ပါပေါ့ဗျာ။
Posted by generation96 at 11:49 AM5comments
“My colleagues and I have come to London in response to the invitation of his majesty government in order to discuss the constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence.” – General Aung San
Bogyoke, you went to England to demand the independence for Burma.
Bogyoke, your daughter came back from England to demand the independence for Burma.
You have sacrificed your life for Burma.
Your daughter is sacrificing her life for Burma.
Bogyoke, thank you for leavingadaughter.
Posted by generation96 at 10:03 AM3comments